प्रधानमन्त्रीसँग भिड्न कांग्रेसले बेलैमा चाल चलेपछि सत्तारुढ दल चकित !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
प्रधानमन्त्रीसँग भिड्न कांग्रेसले बेलैमा चाल चलेपछि सत्तारुढ दल चकित !
काठमाडौं – राजनीतिमा सत्तापक्ष बलियो देखिने गरेपनि कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षले पनि बाजी मार्ने गर्छन् । भारतमा भइरहेको निर्वाचनमा अहिले त्यस्तै रोचक भिडन्त भइरहेको छ ।
भारतको विपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध लड्नका लागि ५ पटकसम्म विधायक रहेका अजय रायलाई बनारस निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार उठाउने भएको छ । कांग्रेस पार्टीले बिहीबार रायलाई बनारस निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार उठाउने घोषणा गरेको हो । कांग्रेसले उम्मेदवार घोषणा गर्दै बेलैमा आफ्नो चाल चलेको छ ।
यसअघि सन् २०१४ मा भएको आम निर्वाचनमा पनि राय बनारसबाट उम्मेद्वार उठेका थिए । तर नरेन्द्र मोदी र आम आदमी पार्टीका उम्मेद्वार अरविन्द केजरीवालपछि उनी तेस्रो स्थानमा आएका थिए ।
पछिल्लो समय कांग्रेसले पूर्वी उत्तर प्रदेशको जिम्मेवारी दिएर महासचिव पदमा ल्याएकी राहुल गान्धीकी बहिनी प्रियंका गान्धीलाई प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध बनारसमा उम्मेद्वार उठाउने चर्चा शुरू भएको थियो । तर उनले भने आफ्ना दाजु राहुल गान्धीको निर्वाचन अभियानमा सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
नरेन्द्र मोदीले भने आगामी शुक्रबार बनारसबाट आफ्नो औपचारिक उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बनारसबाट उम्मेद्वारी दिने रायको स्थानीय भूमिहार समुदाय र ब्राह्मण समुदायमा पनि राम्रो प्रभाव रहेको बताइन्छ । विभिन्न चरणमा भइरहेको निर्वाचनको मत परिणाम झण्डै एक महिनापछि सार्वजनिक हुनेछ ।